जसले महानगरको ‘मेयर’को शान राख्न नसक्ने भए, जनता भन्छन्, ‘नालायकलाई चुनिएछ’
‘सय दिनमा १०१ काम गर्ने वाचा गरेका मेयरका हरेक दिन मरेतुल्य बितिरहेका छन्’– विकास विश्लेषकहरुको गुनासो
| 2018-04-09 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको इतिहासमै सबैभन्दा ‘कमजोर’ छवि बन्दै कार्यकालको मध्यावधि नहुँदै ‘असफल’ मेयरका रुपमा चिनिदै छन्, विद्यासुन्दर शाक्य ।
जसले जितेर पनि जितको औचित्य साबित नगरी दिन बिताइरहेको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालदेखि स्थानीय मतदाताहरु समेतबाट दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
‘सेकेन्ड सेकेन्डको उपलब्धि लिनु पर्ने बेला, हरेक दिन खेर गइरहे सरह कुनै मेयरको बित्छ भने ऊ बाँचेर पनि मरे सरह हो’, उनका दिन जनताका लागि सबैभन्दा ‘बिर्सनलायक’ बनिरहेको गुनासो पोखे भोटाहिटीका एक पुस्तक व्यवसायी हीरारत्न शाक्य (नाम परिवर्तन) ले ।
‘यो मेयर त न सुनिन्छ न देखिन्छ । कस्तो जितेर पनि हारेको जस्तो भयो होगि !’ न्युरोडका एक स्थानीय सुन व्यवसायी रमेश डंगोल (नाम परिवर्तन) को प्रतिक्रिया पनि दुखद छ ।
आफूले मत दिएर चुनेको मेयरको यस्तो ‘निस्क्रिय’ हविगत देखेर काठमडौंका मतदाता मात्र हैन देशैभरका मानिस शाक्यलाई ‘मजाक’ मा पनि उडाउन थालेका छन् ।
केही दिन अघि अनामनगरस्थित एउटा होटेलमा चिया खाइरहेका युवाहरुले चुरोटको धुवाँसँगै महानगरका मेयरबारे यसरी झोंक पोखे, ‘सय दिनमा एकसे एक काम गर्छु भनेर खोक्नेले सिन्को पनि नभाँचे पछि किन मेयर चाहिँ किन उठेको होला यस्तो कामै नगर्ने मान्छे ?’
उनीहरुले अलि सम्यम भाषा पनि प्रयोग गर्दैै भने, ‘किनकि काठमाडौं महानगर त देशकै राजधानी हो नि । उसलाई हेरेर अरुले सिक्नु पर्ने बेला, उसलाई हेर्यो भने त देशका अरु नगरपालिकाहरु समेत यस्तै कामनलाग्ने पो हुने हुन् कि जस्तो लाग्छ भन्या !’
शाक्यलाई हेर्दा स्थापितको ‘मिस’ हुने
काठमाडौं महनागर पञ्चायतकालदेखि नै अचम्म अचम्मका ‘क्यारेक्टर’ छान्न माहिर महानगरभित्र पर्दछ ।
कुनै बेला नानी मैया दाहाललाई महारानी बनाएको काठमाडौं महानगरले कुनै समयमा केशव स्थापित जस्तै अर्का चर्चित पात्रलाई पनि देख्यो र भोग्यो ।
यो पछिल्लो चरणमा आउँदा स्थापितको काँध चढेर चुनाव जितेका शाक्यलाई कहिँ कतै टेलिभिजनतिर देखिहाले पनि स्थापित मात्रै ‘मिस’ हुन थालेको छ महानगरबासीलाई ।
काम नगर्ने, गरे विवादमा फस्ने
महानगर काठमाडौंका प्रमुख शाक्यले भित्र भित्रै केही चाहिँ गरिरहेका छन् है भन्ने एकखाले भ्रम प्रचारमा आयो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनताका ।
निर्वाचनताका एमालेको भोट बिग्रनो भो भन्ने चर्काे आलोचना पछि उनी आबद्ध दलकै मानिस खनिन थाले भन्दै काठमाडौंका कुनाकानी सडकलाई कालोपत्रे गर्न पनि नभ्याएका त हैनन् उनले ।
बोल्दा पनि नबोल्ने र काम पनि नगर्ने ‘नेचर’ भएका महानगर प्रमुख शाक्य एकाएक विवादमा आएको घटना हो रानीपोखरीको पुनिर्निर्माण ।
अचम्म के भयो भने, पुरातात्विक सम्पदालाई जोगाउनु पर्छ भन्ने जान्दाजान्दै उनले महानगरका अरु घरहरुजस्तै ठानेर सिमेन्टेड गर्न लहडमा लागे ।
भित्री टेन्डरदेखि नै कतै न कतै बुद्धि नपुराई रानीपोखरीमा माछा मार्न उत्रिएका मेयर शाक्यलाई रानीपोखरीमा ‘माछो माछो भ्यागुत्तो’ भयो । यसको क्रेडिट मेयरबाट फुत्केर उपप्रमुख रहेकी काँग्रेस नेतृका हातमा पुग्यो ।
कहाँ गए एकसे एक काम ?
निर्वाचनअघि मतदातासँग शाक्यले गरेको वाचा थियो, ‘मलाई चुनावमा जिताउनुस् । सय दिनमा एक सय एक काम गरेर देखाउँछु ।’ धेरैले पत्याय ।
नपत्याउनु पनि किन, विकास भनेकै आकासे फल आँखा तरी मर सरह रहेको काठमाडौं महानगबासीले उनलाई घोट हाले र जिताए पनि ।
ती प्रतिबद्धता मध्ये दर्जन जति मात्रै कार्यान्वयन भएका थिए भने पनि आज काठमाडौंको रुपै फेरिसकेको हुने महानगरबासीको भनाइ छ ।
तर, किन ढाँटे शाक्यले ?
फराकिला सडक, हरियाली वातावरण र सुविधा सम्पन्न केन्द्रीय राजधानी बन्नु पर्ने थियो उनको वाचाकसम अनुसार त । तर, काठमाडौं ‘मास्कमाडौं’ बनेको छ, र पनि वास्ता नै छैन मेयर साहेबलाई ।
काकाकुल जस्तो चिच्याउच्छ महानगर पानी र विकासको तिर्सनाले, अहँ सुन्दैन मेयर साहेबको कानले । फेसबुकका भित्तामा हेर्दा कति धेरै टिप्पणी पाइन्छ काठमाडौंमाथि ।
धुल्माण्डू, हिलेमाण्डू, ढाँटमाण्डू । ठिक वर्ष दिन पुग्नै आँटेको छ उनले जितेको ।
गएको जेठ १४ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी एमाले उम्मेदवारका रुपमा मेयर विजेता बने । जितेको ३ दिनपछि अर्थात् १७ गते उनले कार्यभार पनि सम्हाले ।
कति दिन बितेछन् त भन्दा, त्यसयता आजसम्म ३ सय १५ दिन बितिसकेको रहेछ ।
यस अवधिसम्म शाक्का वाचा कसम कुन कुन पूरा भयो त ?
उनका प्रतिबद्धता– नागरिकमैत्री आचारसंहितादेखि महानगरलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन इ–गभर्नेन्स सिस्टम सुरु गर्नेसम्म, वागमतीको पानीसँगै बगिरहेका छन् ।
उनले के भनेनन्, महानगरलाई साइकल सिटी बनाउने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने, विशेष प्रविधिको प्रयोग गरी धुलो र खाडलरहित सडक बनाउने, धुवाँधुलो न्यूनीकरण गरी ‘नो मास्क सिटी’को अभियान चलाउने ।
तर, कहाँ गए ती वाचा कसम ? के यी कसमहरु ढाँटका पुलिन्दा हुन् ?
सडकमा थुपारिने हार्डवेयर, जथाभावी गिटी बालुवा, र रडको चाङदेखि कुखुराको भालेले पनि सडक ओगट्ने यहाँका सडकमा गाई गोरु बाख्राहरु असरल्ल हिडिरहेका हुन्छन् ।
अहँ, कुनै सिन्को भाचिएको छैन ।
निश्चित समयबाहेक ठुला ट्यांकर र ट्रकहरु अफिस टाइममा महानगर भित्र गुड्न रोके मात्रै पनि हाइ हाइ हुने बेला शाक्य भने कुम्भकर्ण जस्तै सुतिरहेका छन् ।
उनले भनेका थिए, सुपथ मूल्य पसल खोल्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, स्मार्ट कार पार्किङ बनाउने, ती सबै घाममा सुकेका माछा जस्तै सुकिरहेका छन् ।
काठमाडौंमै जन्मेकाले पनि चिनेन सम्पदा महत्त्व
काठमाडौं त सम्पदाले नै मात्र चिनिने सहर हो भन्ने सायद मेयर साहेबलाई थाह नहुँदो हो । उनको कसम त थियो नि, ‘सय दिनभित्र सम्पदा क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि विशेष योजना बनाउँछु ।’
तर, दुखको कुरा भत्केका सम्पदा बनाउन उनले चासै नदिएको उनी निकटहरुकै गुनासो छ । रानीपोखरी काण्ड नै काफी छ मेयरजीका लागि ।
मेयर शाक्य आफूले उठाएका योजना नै पूरा गर्ने पक्षमा देखिनु हुन्न’, काठमाडौं– १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजाल भन्छन् ।
शाक्यको दैनिकी काम ठग्ने कर्मचारीको भन्दा फरक नभएपछि महानगरकै कर्मचारी पनि उनीसित बेखुस छन् ।
‘उहाँ कार्यालय आएर हाजिर ठेक्न मात्रै व्यस्त भएको पाइन्छ । त्यसबाहेक भत्ता आउने कार्यक्रम र विदेश सयरमा मात्रै रमाउनु भो कि भन्ने पनि गुनासो बढिरहेको छ,’ महानगरकै एक अधिकारीले गुनासो गरे ।
हुन पनि उनीमाथि बिलासी गाडीको आरोप त लागेकै हो ।
मोबाइल किनिदिने जस्ता सस्ता एजेन्डा महानगरको वैठकको एजेन्डा बनाउने मेयर यतिबेला बिलासी गाडीमा हुइँकिने, कार्यक्रम उद्घाटन, विदेश भ्रमण, गोष्ठी, पार्टी बैठक तथा कार्यकर्ता भेटघाटमै मात्र रमाउने गर्छन् ।
एमालेभित्रै आलोचित, छायाँ मेयरको अभ्यास !
मेयर भएपछि शाक्यको नामनिसानै हराएको भन्दै निर्वाचनताका उनको धेरै आलोचना गर्ने पार्टी नै एमाले थियो । उनको कार्यशैलीलाई लिएर एमाले भित्र पटक पटक प्रश्न उठेका एमाले निकट स्रोत बताउँछ ।
एमालेभित्र मेयर शाक्यले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको आलोचना हुन थालेपछि पार्टीले छायाँ मेयरका रूपमा राजेन्द्र स्थापितलाई पठाएको स्रोतको दाबी छ ।
महानगर कार्यपालिकाको नवौं बैंठक (असोज ९ गते) ले स्थापितलाई जनसम्पर्क तथा सूचना सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गर्‍यो। तर पनि महानगरको काम कारवाहीमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
स्थापितले भने मेयर शाक्यबाट ‘ठूलो’ जिम्मेवारी नदिएकाले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको उनकै गुनासो बाहिर आएको छ ।
अध्यक्ष ओली निकट भएकै बहानामा उनले कसैलाई नटेर्ने गरेको केही समय अघि कुनै अनौपचारिक भेटमा पूर्व मेयर केशव स्थापितले समेत गुनासो गरेका थिए ।
सिन्को चै भाँचेका छ है कामै नगरी बसे त शाक्य ?
धेरैलाई यस्तै लाग्छ । किनकि उनको नेतृत्व प्रभावकारी भएन भन्ने भित्र एमाले महासचिव नै एक नम्बरमा पर्दछन् ।
उनले वृद्धभत्तामा दुई हजार थप्ने, सार्वजनिक जग्गा खोज्ने, सम्पदा क्षेत्रमा वाइफाइ जोड्ने जस्ता काम त गरेका छन् ।
‘तर, काठमाडौंको बेथिति र आजको महानगरले खोजेको नेतृत्वले यस्ता तपसिलका काममा दिन बिताएर बाहनाबाजी गर्ने छुट नभएको’ पनि एमाले उच्च नेतृत्वले कुनै बेला हपार्दै भनेको वाक्य हो यो ।
यसले पनि पुष्टि हुन्छ, कि मेयरको कार्यशैली प्रति एमाले नेतृत्व कति खुसी छ ।
काठमाडौंमा समस्या नै छैनन् ? कामै छैनन् त मेयरले गर्नु पर्ने ?
खाल्डाखुल्डी सडक, ट्राफिक जाम, धुलोधुवाँले महानगरवासी हैरान छन् । यी समस्याको समाधान नभएको महानगरवासीको गुनासो छ ।
हामीले जनप्रतिनिधिबाट धेरै अपेक्षा राखेका पनि थिएनौं,’ बौद्धनिवासी आङबाबु शेर्पा भन्छन्, ‘सडक बनाउने, हरियाली वातावरण बनाउने, धुलो नियन्त्रण गर्ने, जाम घटाउने लगायत काम मात्रै गरेको भए पनि धेरै देखिन्थ्यो ।’
मेयरका एजेन्डा व्यापारीका भन्दा पत्रु
महानगरमा वर्षेनी ११ अर्बको बजेट छ । त्यसकारण पनि काम गर्नका लागि आर्थिक अभाव नहुने महानगर राजस्व विभागका कर्मचारीको भनाइ छ ।
मेयर शाक्यले चाहे योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने महानगरकै कर्मचारी बताउँछन् ।
तर, उनले कार्यकारी अधिकृतको भन्दा कमजोर योजना ल्याउने गरेको महानगरकै कर्मचारीको आरोप छ । कतिपटक त स्थानीयले समस्या समाधानका लागि गुनासो ल्याउने गर्छन् ।
तर उनी सुन्नै मान्दैनन् । यसबारे बसन्तपुरका गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्’ ‘हामीले सम्पदा पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल गर्न धेरै पटक समय माग्यौं, चुनावअघि सबैलाई समेटेर काम गर्छु भन्ने शाक्य अहिले भेट्ने खोज्दा भागी भागी हिँड्छन् ।’
उनीसित उपमेयर हरिप्रभा खड्गी त वाक्कै भइसकेको बताउँछिन् । हुन त प्रतिपक्षी दलकी नेतृले पाएको बेला उनलाई उडाउलिन् पनि । तर भन्ने ठाउँ दिनु शाक्यकै कमजोरी देखिन्छ ।
शाक्यका दाबी हुँदै छन् त पूरा ?
धेरैजसो मिडियाले आफूलाई खेदेको बताउने मेयर शाक्य यी सबै दाबी विरुद्ध आफूले काम गरेको जिकिर गर्छन् । चुनावका बेला गरेका एक सय एक प्रतिबद्धता क्रमिक रूपमा पूरा भइरहेको उनको जिकिर छ ।
भन्छन्, ‘सबै कुरा रातारात पूरा हुने कुरै आउँदैन । क्रमशः हुने हो । मैले भनेका कुराहरु क्रमशः पूरा हुने क्रममा छन् ।’ के के पूरा भए त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘केही समय पछि परिणाम हेर्नु होला ।’
मिडियाले सपोर्ट नगरेको उनको दुखेसो छ ।
भन्छन्, ‘गर्छुभन्दा पनि गर्न दिएनन् । रानीपोखरी बनाउँदा विवाद भयो, विवाद समधानको लागि विज्ञ समिति बनाइयो । विज्ञ समितिले मल्लाकालीन शैलीमा बनाउन भन्यो ।
तर, त्यो शैलीमा बनाउन म तयार रहँदा कसैले सर्मथन गरेन । मिडियाले पनि मेरो कुरा त बाहिर ल्याउनै चाहेनन् ।’ तर शाक्य भने आशावादी पनि छन् ।
सबैतिरबाट असहयोग भएको उनको गुनासो छ । सहयोग भएमा केही समयमै काठमाडौंमा नयाँपन दिन आफू सक्षम हुने उनको दाबी छ ।
सोमबार, २६ चैत, ०७४